भारतमा डुङ्गा पल्टिँदा १२ जनाको मृत्यु, ३० बेपत्ता ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ समाचार विदेश भारतमा डुङ्गा पल्टिँदा १२ जनाको मृत्यु, ३० बेपत्ता !
३० भदौ, एजेन्सी । दक्षिण भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशमा पर्यटकहरू चढेको एउटा डुङ्गा गोदावरी नदीमा पल्टिँदा १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार आइतवार भएको उक्त घटनामा ३० जना हराइरहेका छन्। उक्त डुङ्गामा झन्डै ६० जना मानिस चढेका थिए। एउटा प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल जान लागेका बेला डुङ्गा एउटा ठूलो ढुङ्गामा ठोक्किएको थियो।
स्थानीय अधिकारीहरूले २७ जनालाई सकुशल उद्धार गरेको बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । नदीमा उद्धारकर्ताहरूलाई खटाइएको छ। अहिले बेपत्ता भएका मानिसहरू खोजिँदैछ।
यसैबिच, राज्यका मुख्यमन्त्री जगन मोहान रेड्डीले सो क्षेत्रमा सबै डुङ्गा सेवा बन्द गर्न आदेश दिएका छन भने यताप्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाबारे दुस्ख व्यक्त गर्दै पीडितहरूलाई सहानुभूति दिएका छन्।
भारतमा डुङ्गामा प्रायस् क्षमताभन्दा बढी भार हालिएको हुन्छ। फितलो सुरक्षा प्रबन्ध र अनुगमनको अभावका कारण बारम्बार दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्।
अघिल्लो लेखनाष्टमा ग्राउण्ड स्टेशन निर्माण सम्पन्न
अर्को लेखजगन्नाथदेवल कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी !